Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Vola tsy nisasarana
Inty sy nday: Vola tsy nisasarana
Herinandro katroka anio no nisian’ny hetsi-bahoaka tetsy amin’ny Kianjan’ny 13 May. Nandritra ity herinandro madiva hifarana ity dia nisy hatrany ny hetsika, ary nisy ny fandehanana niala teo Analakely, toy ny fanaterana taratasy ho fitakiana amin’ny Fitsarana avo momba ny lalampanorenana (Hcc) ny fampitsaharana amin’ny asany ny filohampirenena. Teo koa ny fandehanana teny amin’ny lapan’ny Fitsarana teny Anosy, nanaterana ny taratasy fitoriana an’izay tompon’antoka nampitifitra sy nitifitra ka nahafaty an’ireo mpitolona tamin’ny sabotsy herin’ny androany.
Nifanindran-dalana tamin’izany rehetra izany koa ny fisongadinan’ny porofo fa rehefa avela malalaka haneho ny heviny ny vahoaka dia izy ihany no mametraka ny fitsipi-pifampifehezana, ka tsy voaporofo ny filazan’ny mpitondra fa “mpanakorontana” ireo manao ny hetsika. Na tokom-boatabia iray aza mantsy tsy nisy nikitika.
Fa ny fitondram-panjakana koa dia tsy mitomoe-poana na mitazan-davitra fa miasa mafy mitady ny fomba hanamafisana antoka ny hipetrahana maharitra eo amin’ny toerana sy hanararaotana faran’izay maharitra sy lava indrindra ny fahefam-panjakana eo ampelan-tanana.
Ny amin’ity farany moa dia ny vola no tena ianteherana satria ankoatry ny vola azo tamin’ny tsy marina sy tsy ara-dalàna, fa mety ho vokatry ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena, dia mba misy koa ny volam-panjakana ampiasana ny fahefana eo ampelan-tanana.
Ireo vola miasa na ampiasain’ny mpitondra mba hamonoana afo sy hanamafisany ny toerany izany dia tsy misy vola nisasarany ka tsy ahoany na ho lany rahampitso ihany aza raha izay no hiantoka ny faharetana eo amin’ny fahefam-panjakana.
Fa io vola tsy nisasarana io koa anefa dia tsy azo hadinoina fa mitana anjara toerana lehibe amin’ny fiantohana azy ny mpanefoefo sasany eo anilan’ny mpitondra, toa an-dry Mbola Rajaonah, mba tsy hilazana fa saika izy no miantoka azy rehetra.
Dia na tena mpanefoefo toa inona koa aza anefa dia hanana fahasahiana hamoaka sy handany volabe toa izany nefa ny tena tsy manana fahefana harovana akory? Ny marina dia ny afera maloto no tena niantoka ny ampahany betsaka amin’ny volan-dry Mbola Rajaonah, ary miasa mafy sy mamoaka volabe tokoa izay hamonoana afo izao hetsi-bahoaka izao satria izay no antoky ny tsy fianjeran’ny fitondrana Rajaonarimampianina. Izay no tanjona amin-dry Mbola Rajaonah satria izay no ahafahany manohy hatrany koa ny fanaovany an’ilay raharaha maloto, ka hialokalofany sy hiaro azy amin’ny fotoana rehetra.
Dia mbola voaporofo amin’izany koa ny fahamarinan’ny oha-pitenenaa Malagasy hoe “ny azo amin’ny makarakara dia hivoaka amin’ny kiloadoaka”.
Raha vola nisasaranao ka azonao tamin’ny rariny sy ny hitsiny, vokatry ny hatsebohanao, ilay izy dia haharary anao ny fivoahany na be na kely, fa tsy hampaninona anao kosa ny mamoaka azy rehefa tsy nisasaranao, ary toy ny mandeha ho azy aza satria tsy ara-pahamarinana no nahazoana azy.
Mbola misy koa ny ho akon’ny fanaovana zavatra tsy mazava sy maloto toa izany resa-bola ampiasain-dry Mbola Rajaonah izany any aoriana any fa asa na ho tsapany na tsia rehefa mitranga.
Ny feon’ny fieritreretana izany no tokony hibaiko ny tsirairay amin’ny raharaha toa izany ka handrara ny tsirairay tsy hihoatran’ny fetra farany tokony tsy hioarana. Ny vola mantsy manan-jina ka rehefa tsy nisasarana izy ary azo tamin’ny tsy ara-pahamarinana dia mivoaka amin’ny fomba maro ka mety ho lany amin’ny tsy misy dikany, ary mety haningotra ny ain-dehiben’ny nahavanona nanao izany mihitsy aza.